Bajörklund oo carabka u laalaadiyay go'aankii xisbiga S ee iskuullada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jan Björklund oo xiisad kula jira ardey. Sawirle: Kajsa Carlsson/Sveriges Radio.
Bajörklund oo carabka u laalaadiyay go'aankii xisbiga S ee iskuullada
Dawladdu weli way xiiseenaysaa heshiis loo dhan yahay
La daabacay torsdag 11 april 2013 kl 16.04
Wasiirka tacliinta Jan Björklund ayaa sheegay inuu diyaar u yahay fikirka ah inuu is-bedel ballaaran ku sameeyo habka iskuulaadka madaxa bannaan (mulkida loo leeyahey), hase yeeshee aan marnaba aqbali doonin in maamullada degmooyinka loo siiyo suurtagal ah iney yeeshaan codka diidmada kama dambeeysta waxa loo yaqaanno Vito, sida lagu go'aamiyay shir-weynihii xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ugu qabsoomay magaalada Göteborg toddobaadkii ina dhaafay aakhirkiisii.
Björklund ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa heshiis loo wada dhan yahay oo uu kala yeesho xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ee la xiriira siyaasadda iskuullada madaxa-bannaan, hase yeeshee uu middaa tuhun kaga jiro wixii ka dambeeyay go'aankii shir-weynaha iyo in middaasi suurtagal noqon karto:
- Wixii shir-weynaha ka horeeyay ayuu hoggaanka xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadigu u heelanaa sidii heshiis guud ey xisbiyadu middaa uga gaari lahaayeen, waana mid uu weli sheegayo xisbigu inuu ku taamayo. Waa mid loo baahan yahay, hase yeeshee go'aankii shir-weynaha ayaa xisbiga u rogey dhan kale.
Xilligii kuleeylihii ee sannadkii 2011 ayay ahayd kolkii ay dawladdu u saartay guddiga loogu magac-daray " friskolekommittén" oo ey xubno ka ahaayeen dhammaan xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka kolka laga reebo xisbiyada Bidixda iyo Sverigedemokraterna. Goolka laga lahaa ayaa ah sidii dib u eegid loogu sameeyn lahaa xeerarka haga iskuullada madaxa-bannaan iyo awoodda ey degmooyinku ku yeelan karaan cidda dooneysa inay furato iskuul madax bannaan. Iyo sidoo kale awoodda dul-socod ee lagu yeelan karo habka ey u shaqeeyaan iskuullada madaxa-bannaan.
Macnaha ayaa ahaa in heshiis ey xisbiyadu u dhan yihiin laga gaaro middaa, hase yeeshee mar walba uu dib u dhac ku imanayay, halka uu go'aankii ugu dambeeyay ahaa in 1-da bisha maajo la isaga yimaado.
Su'aasha iminka taagan ayaa ah: Suurtagal ma tahay in heshiis loo dhan yahay middaa laga gaaro, haddii laga tallaabo-qaado go'aankii uu shir-weynaha xisbigu ku qaatay in go'aan kama dambeeys ah la siiyo maamullada degmooyinka iyo iney diidmo kala hor-iman karaan ciddii doonaysa inay furato iskuul madax-bannaan.
Iyo haddii la dooneyo in heshiis guud laga gaaro loo baahan yahay in xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadigu go'aankiisa uu wax ka bedelo:
- Waxaa middaa qiime u yeeli doona sida uu hoggaanka xisbigu u macneeyo ama isaga dheereeyo go'aanka adag ee fikirka xubnaha xisbiga ee u janjeera dhanka bidix.
Dhanka kale wasiirka tacliinta Jan Björklund ayaa weli xiiseeynaya sidii heshiis guud middaa looga gaari lahaa , isla-markaana diyaar u ah tanaasul inuu ka sameeyo sidii heshiis loo dhan yahey loo gaari lahaa:
- Waa sababta aan guddiga ugu saaray. Waxaan xiiseeynayaa in heshiis lix geesood ah oo waara laga gaaro xeerarka hagaya iskuullada madaxa-bannaan. Dhanka dawladda diyaar ayaan middaa u nahay. Is-bedellada qaarkood waxaan rabnaa inaa dhankayaga ka sameeyno, halka qaarka kale oo eynaan hore ugu fekerin ay suurtagal tahay inaannu aqbalno. Hase yeeshee marna aqbali meyno in degmooyinka la siiyo awoodda diidmada qayaxan ee vito, sida uu sheegay Jan Björklund.